Maalinta: Noofambar 17, 2018
Cimilada roobka dartiis awgeed awgeed, garoonka diyaaradaha ee Istanbul, oo ay maamusho garoonka diyaaradaha ee loo yaqaan "IGA Airport", ayaa la sheegay in daadadku galeen oo sawirrada laga jawaabey. Qeybta rasmiga ah ee akoonka Twitter-ka ee garoonka diyaaradaha ee IGA ayaa la wadaagtaa,, Mid kamid ah rakaabkeena shilka [More ...]
Mehmet Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, oo baaraya dhismaha Çamlıca Tower ee dhismahan socda, ayaa yiri, planlıy Waxaan qorsheyneynaa inaanu furno bishaas. Gaadiidka iyo sahaminta ee Toweramlıca Tower, wuxuu ka socdaa Küçük Çamlıca [More ...]
Mashruuca Tababarka Sare ee Ankara-Sivas High End
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan, Tareenka Xawaaraha Sare (YHT) ayaa sheegay in tirada rakaabka ku soo dhowaanaya 44 milyan, "Mashruuca tareenka xawaaraha dheereeya ee Ankara-Sivas uu soo dhowaaday." Ayuu yidhi. Yeni Hiigsi Cusub ee Dhaqanka iyo Dalxiiska ” [More ...]
Wasiirka Warfaafinta Dawladda Hoose ee degmada Saakin
Wasiirka Warshadaha iyo Teknolojiyadda Mustafa Varank ayaa booqday qolyaha ay ku yaalliin magaalada weyn ee 'Smart Future Expo 2018'. Varank wuxuu hirgaliyay Codsiyada Smart City ee ay hirgalisay Dawlada Hoose ee Magaalooyinka iyada oo loo adeegsanayo qaabkeeda, gaar ahaan maamulada maxalliga ah. [More ...]
Eskihisar Street oo gaartay waji cusub
Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay dib u cusbooneysiineysaa wadooyinka iyo jidadka iyadoo la eegaayo howlaha dayactirka iyo howlaha dayactirka ee magaalada. In kasta oo waddooyinka qaar ay daboolan yihiin rafiiq asphalt ah, haddana waddooyinka qaar ayaa gebi ahaanba la cusbooneysiiyay ka dib howlihii kaabayaasha. Ka shaqeynta gobolka Darica [More ...]
Vapur Sugitaanka sugitaanka ee Izmir weligeed ma fiicna
Gawaarida dadweynaha ee adeegsanaya Izmir, ayaa mararka qaar la kulma waxyaalo yaab leh oo la yaab leh. Sida riwaayadaha 'Sahne Young Stage' riwaayadaha ay soo qabanqaabisay Dowlada Hoose ee Magaalooyinka badmaaxyada, jaranjarada iyo saldhigyada. Fannaaniin da 'yarta ah oo masraxa ka qaatay Alsancak Pier, [More ...]
Racfaan qaadashada Khabiirka ee Corlu Train Crash
8 ee degmada Çorlu ee Tekirdağ 25 ayaa la diley bishii Luulyo, dadka 340 ayaa ku dhaawacmay warbixinta tareenka oo ay diyaarisay tareenka ehelka ehelka Dilek Kaplan, Nükhet Karasu, Ekrem Tuna, Erdem Tuna iyo [More ...]
Maanta taariikhda: 17 Nofeembar 1871 Baron Hirsch World Jewel History